Ministirri Ittisaa Ameerikaa Jiim Maatis aangoo gadi dhiisan - BBC News Afaan Oromoo
Ministirri Ittisaa Ameerikaa Jiim Maatis aangoo gadi dhiisan
Ministirri Ittisaa Ameerikaa Jiim Maatis Guraandhala irraa eegalee hojii dhaabu
Ministirri Ittisaa Ameerikaa Jiim Maatis xumura Guraandhalaa "beekamtii waliin" soorama bahu jechuun pireezidant Donaald Tiraamp himaniiru.
Jeneraal Maatis "michoota argachuufi biyyooti kaanis dirqama waraanaa isaanii akka bahan gochuu keessatti hedduu na gargaaran" jechuu Tiraamp Twitter irratti barreessaniiru.
Tiraamp loltoota Ameerikaa Siiriyaa keessaa baasuuf erga murteessanii guyyaa tokko booda kuni kan ta'e.
Traamp waliigaltee Iraan dhiisuuf qophaa'an
Buufanni xayyaaraa Sooriyaa haleelame
Nama isaan bakka bu'u hin himne garuu yeroo gabaabaatti namni muudama jedhan pireezidant Tiraamp.
Xalayaa aangoo gadi dhiisuuf barreessaniin, ilaachi isaanii "michoota hunda kabajaan keessummeessuu" fi "humna Ameerikaan qabdu hunda ittisa waloof" oolchuu kan jedhu akka ta'e himaniiru.
"Dhimma kanaafi kaan irrattis Ministira Ittisaa yaadni isaa kan keetiin wal fakkaatu muuduuf mirga qabda, anis taayitaa koo gad lakkisuun sirriidha jedheen amana jechuun Jeneraal Maatis xalayaa isaa keessatti ibseera.
Oduu kana hordofees Senaaterri paartii Rippablikaanotaa Liindisii Giraam, Jeneraal Maatis tajaajila Tiraampii fi Biyya keenyaaf gumaacheen boonuu qaba jette.
''Inni waggoota kurnaniif mankaraaressitoota Islaamaa waliin wal waraanuun, pirezidaanti Tiraampiif ammoo gorsaa naamusa waraanaa kennaa ture,'' jechuun Twitter irratti barreessite.
Senaatarri paartii Dimokiraatotaa Maarki Waarner ammoo odichi ''sodaachisaadha'' jechuun Maatis nama yeroo bulchiinsi Tiraampi jeequmsaan guutamu tasgabbii fidedha jedhan.
Naannoo Amaaraatti barattooti 1550 qormaata hatuuf maqaa geeddaratan
Tiraampi loltoota Ameerikaa 2000 ol tahan Siiriyaa keessaa baasuuf murteessuun isaanii ejjennoo Maatisiin ala jedhama.
Maatis loltoota Ameerikaa amma baasuun yeroo sirrii miti ammayyuu bakkeewwan dhokatoo keessa hidhattotni IS jiru jechuun mormu. Tiraampi ammoo hidhattotni Is mo'amaniiru jechuun barreessan.
Dabalataan har'as Tiraamp loltoota Ameerikaa Afgaanistaan jiran 7,000 ol tahan gara biyyaatti deebisuuf murteessaniiru. Murtoowwan kunneen Jeneraal Maatis akka aangoo gadhiisaniif sababa tahaniiru jedhama.
Namootni garaagaraa ammoo murtoon Tiraampi kun dogogora Obaamaan Iraaq irratti hojjete irra deebi'uudha jechuun amanu. Siiriyaa keessaa loltoota Ameerikaa baasuu jechuun Raashiyaa fi Iraaniif dirree bal'isuudha jedhu.
Faransaayii fi Jarman miseensa rukuttaa IS irratti Siiriyaatti gaggeefamu kan tahan dabalataan murtoon Tiraampi sirrii akka hin taane himanii IS guutummaatti waan hin mo'amneef loltootni isaanii akka achuma turan ibsan.
Aangoo gadhiisuun Jeneraal Maatisis, soorama waliin kan wal qabatu osoo hin taane garaagarummaa yaadaa Tiraampi waliin qaban akka tahe xiinxaltootni barreessaniiru.
9 Ebla 2018
Ameerikaa- Raashiyaa: Traamp, Putiiniin Ameerikaatti affeeran
Weest Baankitti mana amantaa Yihuudotaa keessa teessoon jiguun lubbuun dabre